Sida loo beddelo IP-ga Dadweynaha: Siyaabaha ugu wanaagsan | Wararka Gadget
Eder Esteban | | General, Tababarada
Waxay u badan tahay in mararka qaarkood aad la yaabtay waxa uu yahay IP Dadweynaha, oo lagu daray habka aan u badali karno. Maaddaama noocan IP-gu uu awood u leeyahay in la beddelo, kaas oo ay jiraan dhowr habab oo maanta la heli karo. Wax badan ayaan kaaga sheegi doonaa hoosta, si aad u ogaato sida ay taasi ku suuroobi karto.
IP-ga dadweynaha waa fikrad aad hubaal maqashay, laakiin ma noqon karto mid aad u cad sida ay uga duwan tahay cinwaanka IP-ga guud ahaan. Jawaabaha intaas oo dhan waxaan idinkugu soo gudbineynaa hoosta, si aad u awoodid inaad ku ogaato tan, marka lagu daro habka loo badali karo.
1 Waa maxay IP Dadweynaha
2 Sida loo beddelo
2.1 Demi router-ka oo daar
2.2 Adeegso VPN
Waa maxay IP Dadweynaha
IP-ga Dadweynaha waa cinwaan IP ah, oo kiiskan uu yahay midka ay bixiyahaaga internetka (guud ahaan hawlwadeenku) kuu xil saaro. Waan arki karnaa sida taarikada ama aqoonsiga. Sidan oo kale, markaan ku xirnaano shabakada, cinwaankan waa la arki karaa waana la ogyahay inaan nahay kuwa ku xiran shabakada, maadaama adeegsade kasta uu leeyahay cinwaan ka duwan kiiskan. Tani waa sida ay u shaqeyso.
Si aad u awood u yeelatid ka-adeegsiga internetka waa lagama maarmaan in la helo IP-ga Dadweynaha. Tani waa wax qasab ah oo lama huraan ah, maaddaama haddii aynaan mid haysan, markaa suurtagal maahan in lagu xirmo shabakadda. Guud ahaan, waxaan ka heli karnaa dhowr nooc noocyadan gudaheeda. Waxaa jira qaar go'an, taasi waa, weligood isma beddelaan, in kastoo badankood yihiin kuwo firfircoon, si kolba markasta ay u beddelaan.
Maaddaama ay tahay cinwaan uu adeeg bixiyuhu noo qoro, waxa ugu badan ee caadiga ahi waa inay firfircoon tahay. Kuwa go'an waa dhif, marka lagu daro, xaalado badan waa la siiyaa, marka waa inaan si cad uga codsanaa hawl wadeenka su'aasha laga qabo. In kasta oo noocan ah dhif in la istcimaalo oo inbadan iyo hawlwadeeno badan joojiyaan xitaa bixinta IP-yada nuucaan ah.
Sida loo beddelo
Maaddaama aad u badan tahay inaad haysato cinwaan firfircoon kiiskan, Waxay u maleyneysaa in la bedeli karo Midda ugu caansan ayaa ah inay tahay hawl wadeenkaaga mas'uul ka ah inuu beddelo waqti ka waqti, inta jeer ee tani waa mid is bedbeddela. In kasta oo ay jiri karaan waqtiyo marka isticmaaleyaashu laftoodu rabaan inay beddelaan iyadoon ku xirnayn hawlwadeenka. Si tan loo gaaro waxaa jira habab qaarkood oo caawin kara in la gaaro.
Demi router-ka oo daar
Runtii waa ficil fudud, laakiin sifiican ayey u shaqeyn kartaa hadaan rabno inaan badalno IP-ga Dadweynaha. Xaaladdan oo kale, dhammaan waa inaan sameyno waa in la damiyo router-keena, oo sidan ugu dhaaf ilbiriqsiyo yar. Ha iska maqnaado ilaa toban ilbiriqsi ama wax ku dhow ka dibna mar labaad ayaanu daarnaa.
Waxay u badan tahay, markaan sidan sameynay, markaan ku xirmayno internetka, waxaan horey u helnay cinwaanka IP-ga Dadweynaha oo ka duwan. Marka dhowr ilbiriqsi gudahood ayaan ku guuleysanay si sax ah wixii aan ka raadinaynay kiiskeena. Waa habka ugu fudud ee aan maanta ku heli karno.
VPN-yada ayaa noo ogolaanaya inaan ku xirno internetka si amaan ah oo qarsoodi ah, oo laga gudbo dhammaan noocyada baloogyada. Mid ka mid ah furayaasha isku xirka noocan ah ayaa ah Waan badali doonaa cinwaanka IP-ga ee aan isticmaaleyno, IP-ga dadweynaha kiiskan. Marka waxaa loo soo bandhigay qaab kale oo aan u adeegsan karno haddii aan rabno inaan cinwaankaas kumbuyuutarka ku beddelno. Waxaan kaliya u baahanahay inaan isticmaalno VPN. Runtii badali mayno IP-ga kiiskan, laakiin adoo adeegsanaya dhexdhexaadiyahan, waxaa naloo aqoonsaday mid kale.
Xulashada VPNs waa mid aad u ballaadhan maalmahan. Xitaa daalacashada sida Opera waxay leeyihiin dhisme u gaar ah VPN, taas oo naga caawin doonta arrintan. Marka waa arrin raadinta ikhtiyaar ku habboon waxa aad raadineyso, taas oo ku siin doonta howlaha aad rabto si aad ugu dhex maraan habka ugu wanaagsan, marka lagu daro bedelida cinwaanka IP-ga Dadweynaha la yiraahdo, oo ah waxa aad rabto markan . Mid ka mid ah dhinacyada maskaxda lagu hayo ayaa ah in VPN-kani yahay mid bilaash ah iyo in kale, maadaama oo dhammaan kuwa suuqa ku jiraa ayna ahayn.
Ikhtiyaar kale oo la mid ah kan VPN, kaas oo ku siin doona adiga suurtogalnimada in la beddelo cinwaanka IP-ga Dadweynaha in aad haysato marka aad ku xirmayso internetka. Hawlgalka adeegga noocan ah wuxuu sidoo kale na siinayaa suurtagalnimada inaan muujino cinwaan ka duwan kan aan isticmaalno marka aan ku xireyno internetka. Marka waxaan ku sameyn karnaa qaab annaga nooga badbaado badan oo caqli badan. Marka waxaan raadin karnaa wakiil wakiil ah oo ku habboon waxa aan raadineyno.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Sida loo beddelo IP-ga dadweynaha
Photoshop-ka iPad-ka hadda waa la heli karaa Muxuu noo soo bandhiga noocan ahi?